Cannabis License Lawsuits - Nei Nyika Dzichitengeswa Pamusoro peCannabis License -
Maitiro ekuti utarise kweCananbis License
Unoda kufona nekukurumidza maererano nechako application
Ongorora Chako chekushandisa neCannabis Gweta
Isu tichaongorora uye nekuongorora yako cannabis rezenisi chikumbiro neziso rekutarisa uye chero njanji dzekuitisa matanho dzaungave uinadzo.
Isu tichaongorora uye nekuongorora yako cannabis rezenisi chikumbiro neziso rekutarisa uye chero njanji dzekuitisa matanho dzaungave uinadzo. Tifonere isu kuchengetedza madhora mazana mashanu pakuongorora kwekushandisa mari kana cheki kubhadhara.
Ndinogamuchira Terms uye Conditions
pashure Pay $$5500
Ndatenda nekutenga kwako.
Nei Matanho Anotsvaga Cannabis License
Cannabis License Mhosva zvinoitika mushure memakwikwi ekushandisa chikwikwi. Nyika kana matunhu anotarisana nengozi yekukwikwidza cannabis rezenisi rinotenderera apo huwandu hwe cannabis bhizinesi kunyorera zvakanyanya kudarika marezinesi aripo. Kupfuurirazve, cannabis rezinesi kunyorera inowanzo kuvezwa nevatatu-mapato, senge yakakura-ina accounting kambani, iyo inogona kukanganisa mukubatanidza mapepa. Unogona kutarisira kuti timu zhinji dzimhan'are rezinesi re cannabis kana vakatenda kuti vanofanirwa kunge vakunda. Hechino chiitiko chipfupi maererano nemaitiro.
Key mapepa ematare ematare pamusoro peCannabis License
Tevedza mitemo yenyika yako kana yemuno
tsvaga kuti chii chakakanganisika mukushandisa
tevedza maitiro ekufadza sarudzo yekutonga
Kuziva litigation haina kumbofungidzirwa uye unogona kurasikirwa
Iva nekunyunyuta kwakanyorwa zvinogutsa
Dzidza zvese nezvekuti ungakunda sei rezinesi mune ramangwana
RELATED POST: Imba Yekukura Cannabis Mu Illinois
RELATED POST: Illinois Dispensary License Chikumbiro
RELATED POST: Cannabis Uye Kutsvaga Kwezvidzidzo
Unoda Cannabis Gweta Kuongorora Yako application?
Tora Kudzokorora Kwekushandisa
KUKURA YAKO STATE YENYENGA YENYAYA YEMANYESHE
Isu tese tinofunga kuti, mushure mekushanda zvakanyanya, zvakanyanya kuti takafanirwa kuhwina rezinesi re cannabis - asi mumakwikwi enzvimbo - vanhu vazhinji havakundi. Ndipo paye panotanga kubhurwa nematare… isu tichataura pamusoro pazvo pane episode yanhasi.
Cash Rejista - CANNABIS LEGALIZATION NYAYA
Ndatenda nekujoinha isu, ndiri Tom - uye iwe unokwanisa kundiwana nekuenda kune webhusaiti yangu - cannabis indasitiri yemutemo.com - kwandinoisa zvemukati saizvozvi kuti uzive zvese zvaunoda kuziva nezve indasitiri yepamutemo ye cannabis indasitiri.
Heino chimwe chinhu chaungave uchiziva iwe - isati nyika dzese dzinobvumidza chero munhu anoda iyo cannabis rezenisi kutora imwe - Nyika dzakaita seI Illinois, kana Missouri, Maryland - vakatora mukwikwidzi rezinesi system umo zvikumbiro zvinoridzwa nevanodaidzwa nyanzvi kuti ndiyo "yakanakisa. ” Tarisa kusvika kumagumo uye ini ndichakuudza nzira inogona kugumisa mhosva dzose, izvo hazvindiitire hanya sechibigator che cannabis. Asi izvozvo hazvina basa nezveIllinois, kana pamwe mamiriro ako mamiriro.
ZVIMWE ZVINOTAURWA NEZVO ZVINHU ZVINOGONESA UNOGONA KUTI VANZVI ZVINOGONESA ZVINHU ZVINOGONA
Kunyangwe kana timu yako yakasimba uye yakawana rezinesi. Illinois chete yakagoverwa makumi mana crafter grower uye 40 infuser marezinesi. Uye, Illinois chete ichapa vanhu vakuru makumi mashanu neshanu-shandisa marezenisi ekunatsa, asi yakagamuchira zvikumbiro kubva pamusoro 700 zvikwata zvakaendesa zvinopfuura zviuru zvina zvekushandisa. Saka kusawirirana kurakareba - neHurumende munguva pfupi yapfuura paakavapa KPMG, imwe yemakambani mana makuru ezve accounting, chibvumirano chekutenderera ichangobva kutenderera yemadhisheni. Chibvumirano chinopa zvisinganzwisisike grading yekukurukura chirongwa chemamirioni maviri emadhora (madhora zviuru zviviri).
DZESVONDO DZESVONDO DZESVONDO DZAKAWANDA DZINOGONA KUKOSHESA LICENSE APPLICATIONS
Chimwe chinyorwa chinonakidza muchibvumirano cheNyika neKPMG ndechekuti inofungidzira mamwe madhora mazana mashanu ezviuru mu "kubvunzana zviri pamutemo," pamwero mukuru we $ 500,000 / awa. Mukutaura kwevagadziri, Nyika inoita kunge yakagadzirira kupa mazana emaawa ebasa rekuongorora kuti "chibvumirano" kana "chirongwa" magweta. Kana iwe usinga zive iwe - wobva warova ivo vanoda uye vanyore kuti vadzidze zvakanyanya pamitemo ye cannabis - asi gweta yekontrakiti inoshanda inosanganisira kukwenya boka revamiriri vasina ruzivo mukamuri, maanobhadharwa zvishoma kuti ashongedze pabasa rakakura. , zvichikonzera chigadzirwa chinodiwa nevanhu vashoma - kwete kunyangwe vanhu vari kuchiita. Ndiye uya anoita kunge arikusarudza timu ipi inowana rezinesi. Inoyamwa yakakura nguva kana iwe ukafunga iyo masvomhu ezvinhu.
Iyo yakapusa masvomhu inodudzira kuti vazhinji vanonyorera vacharasikirwa. 4,000 zvikumbiro kwemasendi makumi mashanu neshanu emakoreji chete yakaenzana nemukana we 75% wekutadza - sekutaura kuri kuenda, tariro inobereka nekusingaperi mu green green ye cannabis indasitiri. Kana iko kusawirirana kwanga kusiri kwenguva refu, iyo yekukanganisa maitiro yakatangwa nehurumende inoita kuti zvinyanye kuti vamwe vanyoreri vangangorasikirwa nekuda kwekukanganisa kwevanhu. Nechikonzero chakanaka, timu yako ingangoda kumhan'ara iyo State kana manisipu kuti iwane iyo cannabis bhizinesi rezenisi ravanotenda kuti vakawana.
Unoda kukwidza Chisarudzo chako
Tarisa Mutemo Wako Nyika Kuti Ungakwidza Sei Cannabis License Sarudzo
For Illinois, iyo Iyo Canannis Regulation uye Mutero Mutero inobvumidza vanyoreri kuti vamhan'are pasi pemutemo wehurumende Administrative Ongorora Mutemo ichiti " ita nzvimbo mudunhu umo bato rinonyorera kuti riongororwe (iye anokumbira) anogara, kana Sangamon County for an-of-state bato. Kutaura nezvekunze kwevatariri venyika, tarisa zvikwata zvedunhu rako zvikwata, kuitira kodzero dzazvo. Iwe unofanirwa kutevedzera izvo zvinodiwa kuti utevere kodzero dzako.
Administrative Ongororo Yekuita Maitiro Anofanirwa Kutevera
Iyo Illinois Administrative Yekuongorora Mutemo ine mashoma anoshamisa marongero ekuita izvo. Izvo zvinoda kuti bato iri kutsvaga kuongororwa rinofanira kufaira kutsutsumwa uye kuburitsa masamanisi mukati makumi matatu neshanu (35) mazuva esarudzo yekutonga ari mubvunzo. Iyo Plaintiff inogona chaizvo inoda kuti iyo Dhipatimendi rekurima kana IDFPR ipe rekodhi yakazara yeongororo yekuita pasi pechikamu 3-108 (a). Nekudaro, "[n] o hutsva kana humwe humwe humbowo mukutsigira kana kupokana nekutsvaga kupi nekupi, kurongeka, kutsunga kana danho redare rekutonga richanzwikwa nedare." Chikamu chimwe chete icho chinopa kuti "[t] anowana uye mhedzisiro yesangano rezvekutonga pamusoro pemibvunzo yechokwadi ichaitwa prima facie ndizvozvo uye ndizvozvo. ”
Rangarira nguva idzodzo dzese dzandakati iwe unoda basa rakakwana uye rakakwana rinokwanisika - zvingaite nekuti nyika yako yekukwikwidza inotora iyo application senge rekodhi yako pakukwikwidza uye haugone kuwedzera chero chinhu chitsva kwairi kuti vaburitse mafungiro avo.
Uyezve inogona kuwana hunyengeri apa - iri parutivi rwechikoro chakakwikwidzwa kuoma kwechirevo - nzira dzekushandisa cannabis kazhinji dzinowanzove nekongiri nzira, ine inoita seyakakwana pfungwa point. Nekudaro, vanonyorera vanopihwa kwete kungotevedzera kwavo mutemo, asiwo nekugona kwavo nekugona kwavo sebhizinesi. Semuenzaniso, kana Hurumende ikaona kuti mafomu emunyori nemidziyo mikuru yakanaka, asi kwete hukuru, iko kufunga kwemutemo kana chokwadi? Aya mashandisi anoita senge mibvunzo yakasarudzika yemutemo uye chokwadi - chinova chinhu chichavhiringidza vasina-litigator, izvo vazhinji vanyoreri havasi.
Zvakare, iyo yakanatswa chinangwa kurava chaiko kunobva kwakanyanya kuzviita sarudzo dzevanhu. Kuenderera mberi nekuomesa nyaya iyi ndiyo nguva yakatarwa yekuburitsa huwandu hwakavakirwa mune mutemo, iyo inogona kungoshandurwa nemutongi wedare. Izvi zvakatoitika muI Illinois, apo musi waKurume 12, 2020, Gavhuna JB Pritzker vakapa kanzuru yehutongi ine chekuita nekoronavirus yakawedzera humbowo hwekunyorera vhiki mbiri. Kunonoka kunonoka kunogona kunge kuri kuuya kweIllinois. Izvo zvakaitika kare mune mamwe matunhu - pasina chirwere chepasi rose chekutarisana nacho.
Kudzokorora kweKadii Kuona kweCannabis License muNyika dzakasiyana
Mushure mekuongorora dzimwe nyika segwara redu, isu tine pfungwa yakanaka yezvinouya senge cannabis litigation ramp kumusoro. Nyika yeFlorida yatora tsika yekungogadzirisa nevanotenderera mukutsinhana kupihwa kwe permiti. Florida iri zvakare kuenda kuburikidza yakaparadzana yepamutemo kurwa nekuti iyo nyika inoda cannabis makambani kuve ari vertiki Integrated, iyo ine mhedzisiro yekugadzira makuru ekuvhiringidza kupinda. Missouri iri kutarisana zvakare nekunetseka kwakanyanya kudzoka mushure mekutenderera kwayo kwekupedzisira kwekushandisa. Kune huwandu hukuru hwematare ematare - mumazana - akamirira mushure mekunge mazana emazana nemazana evanyoreri akatadza kukodzera kunyorwa Makumi matanhatu ekudyarwa marezenisi. Chinonyanya kunetsa muMissouri ndechekuti ivo vakundi vakaita sekuwanzoita vezvematongerwo enyika akabatanidzwa vanhu vamwe navamwe. Mukugadzirira zvikwata zvedu zvekupemha, takapupurira-kutanga-tarisa kuti misiyano yakawanda sei iyo hurumende dzemuno dzingaite mukutsigira kana kupikisa munhu anenge achikumbira. Iwe unogona kunge wakambonzwa ini ndichidaro, uye kana iwe unyoresa unondinzwa ndichitaura zvakare - ese cannabis ndeyemuno.
Cannabis License Litigation uye Lottery Systems
Hatigone kutaura chokwadi kuti cannabis litigation ichafamba sei muIllinois. Asi kana Florida neMissouri chero chiratidzo, zvave kuda kunge iri bhizinesi hombe iripo kugara. Kuvonga kwekutarisa kusvika kumagumo - Zvino ngatifungidzirei nzira iyo dzimwe nyika dzinogona kudzivirira kuverengera zvisizvo pakukwirisa vanyoreri chikoro chepamusoro. Kudzivirira ichi chiitiko kunogona kuve chimwe chinhu icho nyika inoda kuti mutemo wayo uzadzikise.
Nyika dzakaita seArizona, semuenzaniso, dzakurudzira mitemo ye cannabis inodaidzira kuti zvimwe zvinodiwa zvisanganiswe neanonyorera anoita sechikumbaridzo kuti akwanise kutamba lottery rezinesi. Illinois 'inodaidza lottery kana paine chisungo pakati pevakanyanya kukwirisa chikumbiro. Rotari ine runyararo zvechokwadi yakaomesesa kupokana kuti iwe wakanganisirwa, kunze kwekunge yaomeswa. Asi zvirokwazvo hapana chinogona kuve chakakwenenzverwa muindasitiri ye cannabis, kana chero indasitiri - ndizvo?